Fifandraisana - Bezzia | Bezzia
Miaraka amin'ny fifandraisana dia miresaka momba ny fifamatorana izay noforonintsika amin'ireo olona tadiavintsika isika ary te ho anisan'ny fiainantsika. Izany no antony itokanana ity fizarana ao amin'ny Bezzia ity ho an'ny Fifandraisana mpivady: lakile, olana na torohevitra hankafizana fifandraisana tsara.
Ity dia teboka tena lehibe eo amin'ny fiainan'ny vehivavy, satria ankoatry ny maha-ampahany amin'ny tandem izay mety haharitra mandritra ny androm-piainany dia io no dingana voalohany mankany amin'ny zavatra lehibe kokoa: manan-janaka. Noho izany, hohamafisinay ny lakilen'ny a fiaraha-miaina tsara, izay handia tsara amin'ny tenanao, hahalala ny mpiara-miasa amintsika, hahatakatra azy ireo ary hikarakara ny fifandraisana.
Noho izany, amin'ity fizarana ity dia hanome toro-hevitra indrindra izahay ary hiezaka hampahafantatra anao ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana na ny fanalefahana ny fifandraisanay.
ny Maria Jose Roldan hace Andro 5 .
Ny aretim-po dia tsy lovia tsiro mahafinaritra ho an'ny olona rehetra ary mihevitra ny tahotra mahatsiravina fa ilay olona ...
Ara-dalàna ve ny tolona herinaratra ao amin'ny mpivady?
Ny zavatra iray dia ny zavatra hitanao amin'ny fahitalavitra sy amin'ny sinema ary ny iray hafa tanteraka dia ny ...
Tsy mitovy ny mizara fiainana amin'ny olona mahita zavatra amin'ny lafiny tsara, fa tsy amin'ny ...
Ahoana ny fomba hahamety ny fifandraisana mandritra ny fiainana
Rehefa manomboka fifandraisana iray ny olona iray dia mieritreritra izy ireo fa haharitra mandritra ny androm-piainany ary haharitra ao amin'ny ...
Azo atao ve ny manirery amin'ny mpivady?
Ny fananana vady dia misy lafiny tsara miorina amin'ny fanamafisana ny fahatokisan-tena ka hatramin'ny fanatsarana ny fanjakana ...
Ny tena fitiavana no hahatonga ny olona ho sambatra indrindra eto an-tany ary ...